ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များလည်ပတ်စဉ်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောမည်သည့်အချက်အလက်နှင့်မဆိုသင်၏ privacy ကိုလေးစားရန် opskar.com ၏မူဝါဒဖြစ်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်အော်ပရေတာအများစုကဲ့သို့ OPS သည်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာများနှင့်ဆာဗာများပုံမှန်အားဖြင့်ရရှိနိုင်စေသည့်အမျိုးအစားများ၊ ဘာသာစကားရွေးချယ်မှု၊ ရည်ညွှန်းသည့် site နှင့် visit ည့်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏နေ့စွဲနှင့်အချိန်တို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာမဟုတ်သောအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမဟုတ်သောအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်းသည် OPS visitors ည့်သည်များ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ OPS သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိသောအချက်အလက်များကို စုစည်း၍ အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်နိုင်သည်။ ဥပမာ - ၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခြင်း။
Ops လည်းအသုံးပြုသူများကို logged in ဝင်သောများအတွက် Internet Protocol (IP) လိပ်စာများတူသောနှင့် opskar.com ဘလော့ဂ်များ / ဆိုဒ်များတွင်မှတ်ချက်များထွက်ခွာအသုံးပြုသူများအတွက်အလားအလာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း။ သာကြောင်းမှတ်ချက်ပေးသူက IP လိပ်စာများနှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများ မှလွဲ. အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်တွေ့ရမှာပါသောတူညီသောအခြေအနေများအောက်တွင်သုံးစွဲသူနဲ့မှတ်ချက်ပေး IP လိပ်စာများ logged in ဝင်သောတွေ့ရမှာပါ Ops မြင်နိုင်ဖြစ်ကြပြီးရှိရာမှတ်ချက်ဘလော့ဂ် / site ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှထုတ်ဖော် ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
အချို့သော OPS ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသို့လာရောက်လည်ပတ်သူအချို့သည် OPS နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖော်ထုတ်သောအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်လိုအပ်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန်ရွေးချယ်သည်။ OPS မှစုဆောင်းရရှိသောသတင်းအချက်အလက်ပမာဏနှင့်အမျိုးအစားသည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ospkar.com တွင်စာရင်းသွင်းထားသော visitors ည့်သည်များအားအသုံးပြုသူအမည်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပေးရန်တောင်းဆိုသည်။ OPS နှင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်ထိုငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ဘဏ္informationာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပါအဝင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန်တောင်းဆိုခံရသည်။ အမှုတစ်ခုစီတွင် OPS သည်ထိုသတင်းအချက်အလက်များကိုလိုအပ်သည့်သိုမဟုတ်သင့်လျော်သည့်အတိုင်းသာ OPS နှင့် visit ည့်သည်၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရယူသည်။ OPS သည်အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းမှ လွဲ၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခွဲခြားသတ်မှတ်သည့်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင် visitors ည့်သည်များသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖော်ပြရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်သက်ဆိုင်သောလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ခြင်းမှတားဆီးရန်သတိပေးချက်နှင့်အတူအမြဲတမ်းငြင်းဆိုနိုင်သည်
Ops ယင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှဧည့်သည်များ၏အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. စာရင်းဇယားစုဆောင်းလိမ့်မည်။ Ops လူသိရှင်ကြားဤအချက်အလက်ဖော်ပြရန်သို့မဟုတ်အခြားသူများကပေးလိမ့်မည်။ သို့သော် Ops အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထက်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်မထားဘူး။
OPS သည်မိမိ၏ ၀ န်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများနှင့်တွဲဖက်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်သာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖော်ထုတ်နိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသသည် (i) ၎င်းအချက်အလက်များကို OPS ကိုယ်စားကိုယ်စားပြုရန်သို့မဟုတ် OPS ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်အတွက်လိုအပ်သည်။ ii) သူကအခြားသူများအားထုတ်ဖော်ရန်မသဘောတူညီခဲ့ပါပြီ။ အချို့သော ၀ န်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများနှင့်တွဲဖက်အဖွဲ့အစည်းများသည်သင်၏တိုင်းပြည်ပြင်ပတွင်တည်ရှိနိုင်သည်။ OPS ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းအချက်အလက်များကို၎င်းတို့ထံလွှဲပြောင်းရန်သင်သဘောတူသည်။ OPS သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖော်ထုတ်နိုင်သောနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖော်ထုတ်နိုင်သောအချက်အလက်များကိုမည်သူ့ကိုမျှငှားရမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများနှင့်တွဲဖက်အဖွဲ့အစည်းများ မှလွဲ၍ OPS သည်ဆင့်ခေါ်ခြင်း၊ တရားရုံးအမိန့်သို့မဟုတ်အခြားအစိုးရ၏တောင်းဆိုချက်ကိုတုံ့ပြန်ခြင်းဖြင့်သာလျှင် OPS သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်။ OPS၊ တတိယပါတီများသို့မဟုတ်ပြည်သူလူထု၏ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်အခွင့်အရေးများကိုအကာအကွယ်ပေးရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာလိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် OPS ဝက်ဘ်ဆိုက်၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဖြည့်သွင်းပါက OPS သည်သင့်အား features အသစ်များအကြောင်းပြောပြရန်၊ သင်၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုတောင်းခံရန်သို့မဟုတ် OPS နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ OPS နှင့်အတူဖြစ်ပျက်နေသောအရာများကိုနောက်ဆုံးအခြေအနေဖြင့်အီးမေးလ်တခါတရံပေးပို့နိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်များ။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုမှုတစ်ခုပေးပို့သည် (ဥပမာ - အီးမေးလ်မှသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားတစ်ခုမှတစ်ဆင့်) ကျွန်ုပ်တို့ကသင်၏တောင်းဆိုချက်အားရှင်းလင်းရန်သို့မဟုတ်တုန့်ပြန်ရန်သို့မဟုတ်အခြားအသုံးပြုသူများကိုကူညီရန်အတွက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေခွင့်ရှိသည်။ OPS သည်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖော်ထုတ်နိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာလိုအပ်သောဆောင်ရွက်မှုများကိုပြုလုပ်သည်။
Cookie ဆိုသည်မှာဝက်ဘ်ဆိုက်သည် or's ည့်သည်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိုလှောင်ထားသည့်အချက်အလက်များနှင့်, ည့်သည်၏ browser သည် returns ည့်သည်မှပြန်လာတိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုထောက်ပံ့ပေးသောသတင်းအချက်အလက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ OPS သည် cookies များကို အသုံးပြု၍ သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သတ်၍ visitors ည့်သည်များ၊ OPS ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုမှုနှင့်သူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ရှုခြင်း ဦး စားပေးမှုများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်ကူညီပေးသည်။ သူတို့၏ကွန်ပြူတာများတွင် cookies များကိုမထည့်လိုသော OPS visitors ည့်သည်များသည် OPS ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမသုံးမီသူတို့၏ browsers များကို OPS ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမသုံးမီသူတို့၏ browser များသတ်မှတ်ထားသင့်သည်။
၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုသိသိသာသာ Ops, ဒါမှမဟုတ်ရှိသမျှတို့, ဝယ်ယူဒါမှမဟုတ်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ရပ်အတွက်ကြသည်မှန်လျှင် Ops လုပ်ငန်းထွက်ဝင်သို့မဟုတ်ဒေဝါလီဝင်အကြောင်း, အသုံးပြုသူသတင်းအချက်အလက်တတိယပါတီလွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မယ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောလွှဲပြောင်းဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါဝန်ခံနှင့် Ops မဆိုရယူဤမူဝါဒအတွက်ထွက် set အဖြစ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်သုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ပါစသော။
အပြောင်းအလဲအများစုသည်အသေးအဖွဲဖြစ်ဖွယ်ရှိသော်လည်း OPS သည်၎င်း၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုအခါအားလျော်စွာနှင့် ops ၏တစ် ဦး တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ OPS သည် page ည့်သည်များကို ၄ င်း၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒပြောင်းလဲမှုရှိမရှိကိုမကြာခဏစစ်ဆေးရန်တိုက်တွန်းသည်။ သင့်တွင် opskar.com အကောင့်တစ်ခုရှိပါကသင့်အားဤပြောင်းလဲမှုများကိုအကြောင်းကြားရန်သတိပေးချက်တစ်ခုကိုသင်ရရှိပေမည်။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီအပြောင်းအလဲတစ်ခုပြီးနောက်သင်ဤ site ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ပြောင်းလဲမှုကိုသင်လက်ခံသည်။